लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा नगए कहाँ जाने ?::त्रिशुलीखवर
– उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम
संविधान घोषणाको पृष्ठभूमिदेखि सँगै आन्दोलनमा रहेका साथीहरू आन्दोलनमा छन्, तपाईं निर्वाचनको तयारीमा । हिजोका सहकर्मीको आन्दोलनले अहिले तपाईंको निर्वाचनलाई असर गर्छ कि गर्दैन ?
राजपाको बहिष्कार वा आन्दोलनले संघीय समाजवादी फोरमलाई केही असर गर्दैन । राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा पनि राजपाभन्दा सशक्त र ठूलो दल फोरम नै हो । लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग नगर्ने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कदमले राजपालाई नै बढी असर गर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग नलिए कहाँ जाने रु कुन बाटो लिने रु कि त भन्नुपर्यो अबको बाटो फरक भइसक्यो भनेर । होइन भने त निर्वाचनमा भाग लिनुको विकल्प छैन ।
आन्दोलनकारीले फोरमका कार्यालय तोडफोड गर्ने, झन्डा जलाउने काम गरेका छन् । त्यसप्रति तपार्इंको धारणा के छ ?
राजपाबाट गलत हर्कत भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका झन्डा जलाउने, दलका कार्यालय तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति गलत हो । झन्डा जलाएर, कार्यालय तोडफोड गरेर मधेसका जनताको कल्याण कसरी हुन्छ रु आफ्नो प्रभाव भए अर्थात् जनताको मतप्रति विश्वास भए निर्वाचन गए हुन्छ । हाम्रो दल मधेसको पहिलो शक्ति हो । राजपाका यस्ता गतिविधिले फरक पर्दैन । पहिलो कुरा, हामीले उठाएका मुद्दाहरू जनताले अनुमोदन गरे भने देशको एजेन्डा बन्छ । जनअनुमोदित एजेन्डालाई राज्यले पन्छाउन सक्दैन । दोस्रो कुरा, जनविरोधी शक्तिलाई जनताले ब्यालेटपेपर ९मतपत्र०बाट परास्त गर्छन् । हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा नश्लवादी र विभेदकारी शक्तिलाई जनताले निर्वाचनबाट परास्त गर्छन् ।
तर, तपार्इंहरूले भाग लिने तयारी गरे पनि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन स्थगित भएको छ, सरकार राजपाको आन्दोलनको दबाबमा परेको देखिन्छ, तपाईंको भनाइ के छ ?
हामी त पहिलादेखि नै एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा थियौँ । तर, सरकारले विभिन्न चरणमा गर्ने भन्यो । अहिले फेरि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्ने काम भएको छ । यसबारे बैठक बसेर हाम्रा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ । एकदमै संवेदनशील कुराहरू आइरहेका छन्, अध्ययन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।